Mon, Jun 18, 2018 | 05:55:43 NST
18:53 PM ( 8 months ago )
काठमाडौँ, असोज १९ – यस वर्ष गएको वर्षभन्दा बढी धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले पोहोरको भन्दा बढी ५४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने बताएको हो । पोहोर साल सबैभन्दा बढी ५२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
बाढीले क्षतिजत्तिकै फाइदा, ममिलो माटो खेतमा !
कहाँ कहाँ धान काट्न शुरु भयो ?
चुनावअघि नै धान काटेर भित्र्याईसक्ने लक्ष्य !
असोज महिनामा धान काट्ने र कात्तिक महिनामा घरमा भित्र्याएर मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भोट हाल्ने किसानको योजना छ । चुनावमा आफु निकटका दल र उम्मेद्वारलाई भोट माग्ने र सहयोग गर्न भ्याई नभ्याई हुने भएकाले त्यसअघि नै धान काटिसक्ने योजना झापाकी किसान मीनु राईको छ ।
‘चुनावमा घरको काम गर्न भ्याईदैन । चुनावमा सबै पार्टी र नेताको पछि लाग्ने भएकाले घरको काम गर्ने कोही हुदैन् । त्यसैले अहिले कात्तिक महिनासम्म धान काटेर भित्र्याईसक्ने लक्ष्य छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
धान काट्दा र भित्र्याउँदा के के कुरामा ध्यान दिने ?
बर्षातको बेला धान रोप्नदेखि गोडमेल गर्न दुःख गरेजत्तिकै पाकेको धान काट्न र भित्र्याउन पनि विचार गर्नुपर्छ । खेतमा धेरै दुःख गरी रोपिएको धानबालीको स्याहार सुसारसँगै धान काट्दा पाके नपाकेको राम्ररी थाहा पाउन र भित्र्याउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका धान बाली विशेषज्ञ हरिकृष्ण उप्रेति बताउनुहुन्छ ।
‘धान पाकेको छ की छैन ? सबैभन्दा पहिला त्यो थाहा पाउनुपर्छ । धान पाकेको छ भने काट्नुपर्छ । नभए राम्ररी पाक्न दिनुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
पाकेको धान दाँतले टोक्दा आवाज आउँछ । यदि पाकेको छैन् भने आवाज आउँदैन । पाकेको धानको गेडा पोटिलो हुन्छ भने त्यो बिउका लागि पनि उत्तम र विक्रीका लागि पनि राम्रो हुन्छ । त्यसको भात पनि उत्तिकै मिठो हुन्छ । तर भात पाकेको छैन् भने भात पनि मिठो हुदैन् चामल पनि टुक्रिएर कनिका मात्रै हुन्छ ।
त्यसैले धान पाके नपाकेको राम्ररी जाँचेर मात्रै काट्नुपर्छ । धान पाकेको छ भने खेतमा रहेको पानी खोलिदिनुपर्छ । अर्थात तिन चार दिन पहिला नै धानखेतलाई सुख्खा बनाउनुपर्छ । यसले धानको बालाई पाक्न सहयोग गर्छ र गेडा पनि पोटिलो हुन्छ ।
(झापाबाट गोपाल गड्तौला, कपिलवस्तुबाट गोपाल भण्डारी र कैलालीबाट नवराज पनेरुको सहयोगमा)